Parallels and Leopard: Tokony hananana ny mpampiasa Mac mpampiasa | Martech Zone
Miaraka amin'ny rindranasa raharaham-barotra maro izay miala amin'ny Microsoft, Mac dia mbola maharary amin'ny banga ihany amin'ny fihazakazahana eo amin'ny sehatry ny orinasa. Ny fanavaozana ny Operating System vaovao indrindra avy amin'ny Apple dia manome fanamaivanana amin'ny BootCamp, rindranasa ahafahanao manaparitaka Mac roa miorina amin'ny Intel na OSX na Windows.
Ny booting indroa, amin'ny ankapobeny, dia toy ny mampandeha solosaina roa tsy mitovy amin'ny fitaovana mitovy amin'izany. Tsy maninona ny Bootcamp, fa tsy mora ny mifamadika sy miverina. Ny Parallels dia namaha ny olana, na izany aza ary nanakambana ny tontolo roa ho lasa tontolo iray izay toa tsy mety fotsiny! Izaho dia mihazakazaka Parallels (misaotra ny namana, Bill) hatramin'ny niandohany voalohany indrindra.
Rehefa nampidirina ny firaisan-kina dia tamin'izay no nanomboka nisy ny zavatra adala… ny fananana dock, bara fiasa ary bara an'ny paoma ao anaty varavarankely iray dia toa diso daholo! Mbola ratsy kokoa aza? Misintona sy milatsaka avy amin'ny rindranasa Windows mankany amin'ny rindranasa Mac ary ny mifamadika amin'izany. Oay! ny Adihevitra Mac vs. PC ampodiana, sa tsy izany?
Tsy mila mpanaingo marobe intsony ny mpanakanto sary, mpamorona tranonkala, na teknisiana manome toky momba ny kalitaon'ny fampiharana mba hanao zavatra tsotsotra toa ny fitsapana ny fanarahana ny Cross-browser. Izy rehetra dia afaka mihazakazaka mandehandeha ao amin'ilay Mac ihany - raha ny ahy dia MacBookPro.
Rehefa nivoaka i Leopard dia toa efa tapitra ny fifaliako! Nanimba ny XP aho ary tsy afaka niasa toy ny taloha intsony ny rindranoko. Nihombo aho, ary nanararaotra nanoratra sasany tamin'ireo olona tao amin'ny Parallels manokana. Lehilahy tsara izy ireo ary nanome toky ahy fa efa akaiky ny fanampiana!
Parallels sy Leopard
Tamin'ity herinandro ity dia tonga! Ny fanavaozana farany ny Parallels dia nanampy fiasa bebe kokoa miaraka amin'ny mifanentana amin'ny Leopard. Raha mitady fampiharana tsara ho an'ny mpankafy Mac ianao - dia mety izany.
Raha olona PC ianao ary matahotra fotsiny an'ireo olona Mac mahafinaritra ireo - ity no anjaranao hanana ny paoma manjelanjelatra ao amin'ny solosainao finday fa mihazakazaka fampiharana tsara ao Windows.
Tags: Mponinahevitra momba ny famolavolanatsena fikarohanafanadihadiana an-tseraserahevitra momba ny vokatrahaino aman-jery sosialySurveyMonkeyfanadihadiana momba ny fikarohana eny an-tsenaubervufitaovana famolavolana tranonkala
Dec 15, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Mbola tsy nahavita herim-po ampy hahazoana Mac voalohany aho. Ny zanako vavy zanako vavy dia mianiana amin'ny azy ary ny reniny, ilay iray hafa manan-danja amiko, dia mangalatra ny Mac-ny foana satria heverina fa mora be ilay izy. Lehibe aho… (nanomboka tamin'ny krizy antenatenany ka hatrany an-tampon'ny havoana)… teo amin'ny Windows ary misalasala ny hiova aho. Misy olona hanery ahy amin'ny làlana tsara ve. Fa maninona no hividy Mac. Mila solosaina finday vaovao sy maivana kokoa aho.
Mac no làlana tokony aleha, indrindra fa miaraka amin'ny Parallels. Miomana hametraka an'i Leopard amin'ny solosaina finday vadiko. Tamin'ny asako farany dia ny fanindriana ny solosaina finday mac mba tena hitsapana ny navigateur cross amin'ny masinina 1 fa tsy mila laboratoara fanandramana.
Efa nanana ny birao Mac nandritra ny taona maro aho ary tsy nanana olana tamin'izany tahaka ny fampiasana PC sy windows.
Nieritreritra ny hahazo an'io ho an'ny asako mac aho, mba hahafahako mitsapa tranonkala amin'ny mpitsidika Windows… Manontany tena aho hoe ohatrinona ny hog sumber?
Dec 15, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Tsy dia ratsy loatra, Mike. Isaky ny ohatra OS napetrakao dia azonao atao ny mametraka ny habetsaky ny fahatsiarovana mifandraika amin'izany. Manana RAM 2Gb aho ary manana Windows XP mihazakazaka hatramin'ny 1Gb.
Tsy mila hery fanodinana firy ny fampandehanana OS na iray aza - fa ny rindranasa ampiasanao ao dia ho kisoa raha kisoa taloha.
Dec 15, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Mampiasa VMWare Fusion aho, izay inoako fa safidy tsara kokoa, satria manara-penitra kokoa. Inona no hataonao amin'ny ohatra Parrallels Windows raha te hifindra any linux ianao amin'ny ho avy? Tsy olana amin'ny Fusion…
Dec 16, 2007 amin'ny 9: 52 AM
Tsy azo antoka ny Linux ato ho ato avy amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa ny biraonao. Amin'ny Parallels dia afaka mihazakazaka ny rindranasa rehetra ilaiko aho. Azoko atao ihany koa ny mihazakazaka Linux amin'ny Parallels (nanana ny Ubuntu aho fa tena nanakorontana ny fametrahana azy!).
Mpankafy virtualisation sy VMWare aho. Tena mamindra ny tontolon'ny famokarana ataoko aho Bluelock, orinasa iray mahafehy virtualization ho an'ny fampiantranoana fampiantranoana miaraka amin'ny VMWare.
Tsara ny mahita anao eto, Dale! Hitako fa natolotra ny SEC ny antontan-taratasy ExactTarget IPO. Cool zavatra!
Dec 16, 2007 amin'ny 3: 49 AM
Lahatsoratra momba ny virtualization sy mac, ary iray amin'ireo mpilalao lehibe ihany no lazainao? Aiza ny fitiavana an'i VMWARE (izay heveriko fa ambony… toa “voadio” ihany).
Dec 16, 2007 amin'ny 9: 55 AM
Matahotra aho fa vaovao amin'ny resaka VMWare ary tsy manana an'io. Heveriko fa satria ny zavatra ilaiko rehetra dia miasa miaraka amin'ny Parallels. Araka ny nanoratako an'i Dale tetsy ambony, ny VMWare dia ho ampahany lehibe amin'ny fametrahana ny famokarana atsy ho atsy, na izany aza. Afaka mamerina ny tontolo iainana isika ary mitondra 'tsiro' samihafa amin'ny fampiharana amin'ny taona ho avy.
Dec 17, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Vao avy nohavaoziko ny Parallels amin'ny kinova farany, ary ankehitriny ny Vista (Business) dia mitaky ahy hampihetsika azy indray, ary tsy mandeha ny fampidirana an-tserasera. Izany koa dia mitranga raha te hihazakazaka VMware na Parallels miaraka amin'ny bootcamp ianao.
Dec 17, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Mahaliana ny mahita ny fomba hiatrehana ny Microsoft amin'ny virtualization sy ny fizotrany activation - zavatra izay tsy noeritreretiko! Angamba io no iray amin'ireo tombony azo amin'ny fandehanana miaraka amin'ny fonosana virtualization vaovao an'ny Microsoft, Hyper-V!
Dec 18, 2007 amin'ny 12: 21 AM
Mampihetsi-po izaitsizy ny tsy mahay mampiasa ny endrika bootcamp an'ny Windows miaraka amin'ny endrika VMWare noho ny famerana ny famerenana. (Izy io dia mahita ny "fanovana fitaovana" ary mampiato anao rehefa mifindra amin'ny endrika hafa ianao).
Tsy mpankahala Windows mihitsy aho, saingy mahasosotra izany rehefa nividy kopian'ny Vista Business aho.